PSJTV | कुन आयोजनाको अवस्था कस्ताे ?
कुन आयोजनाको अवस्था कस्ताे ?
शनिबार, २५ जेठ २०७६ पिएसजे न्युज
देशको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठूला आयोजनामा वर्षौँसम्म प्रगति नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ नाम दिएर प्राथमिकतामा राखे ।
०६८–६९ मा भट्टराई सरकारले त्यस्ता १७ आयोजनालाई विशेष महत्व दिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटे । ०७०–७१ मा थप चार र चालू आर्थिक वर्षमा एक आयोजना त्यसमा थपिए । आगामी आर्थिक वर्षमा तमोर जलाशययुक्त आयोजना र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनलाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेट्ने सरकारको तयारी छ ।
तर, राष्ट्रिय महत्वका यस्ता अधिकांश आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा राज्यकोषमा झन्डै दुई खर्बको व्ययभार थपिएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन बस्नेत, पुष्प कोइराला र दिवाकर पन्तले लेखेका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
लागत अनुमानः २३ अर्ब ४५ करोड
संशोधित सम्पन्न मितिः ०७५–७६
ढिलाइपछिको संशोधित लागतः ३५ अर्ब ५४ करोड
आगामी आवमा विनियोजित बजेटः ७ अर्ब ३९ करोड
६ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना लम्बिँदै जाँदा १८ वर्ष पुगेको छ । अझै १० प्रतिशत काम बाँकी छ । यहीबीच गत २९ मंसिरदेखि इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम छाडेपछि आयोजना ठप्प छ ।
बाँकी काम १५ महिनामा पूरा गर्न मेलम्ची विकास समितिले हालै टेन्डर आह्वान गरेको छ । आयोजना लम्बिँदा राज्यलाई १२ अर्ब ११ करोड व्ययभार थपिएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
थालनी–सम्पन्नः ०७१–७२/०७८–७९ (सुरु भएकै छैन)
लागत अनुमानः ३ खर्ब ८० अर्ब
लगानी बोर्डले प्रस्ताव गरेको सम्पन्न मितिः ०८२–८३
आगामी आवमा विनियोजित बजेटः १ अर्ब ५० करोड
सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गतको बुट मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ । लगानीकर्ता छनोट गर्ने जिम्मा लगानी बोर्डले पाएको छ ।
सातवटा कम्पनीले यो आयोजनामा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका छन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार आगामी एक वर्षभित्र उत्कृष्ट निर्माण कम्पनी छनोट गर्ने लक्ष्य छ । त्यसपछिका ६ वर्षमा निर्माण सक्ने योजना छ ।
लागत अनुमानः २ खर्ब ५९ अर्ब
संशोधित सम्पन्न मितिः ०८२–८३
ढिलाइपछिको संशोधित लागतः ३ खर्ब
आगामी आवमा विनियोजित बजेटः १३ अर्ब ५७ करोड
१२०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाका लागि ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म ४१ हजार ९३४ रोपनी जग्गा मात्र अधिग्रहण गरिएको छ।
नौ अर्ब ९४ करोड मुआब्जामा वितरण भएको छ । आरुघाट, आर्खेत, खहरेलगायतका क्षेत्रको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । निर्माणको मोडालिटी पनि टुंगिएको छैन।
फास्ट ट्र्याकमा ३१ अर्ब लागत बढ्यो
लागत अनुमानः ८० अर्ब
संशोधित सम्पन्न मितिः ०७८–७९
ढिलाइपछिको संशोधित लागतः १ खर्ब ११ अर्ब
आगामी आवमा विनियोजित बजेटः १५ अर्ब ७२ करोड
फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेको छ । उसका अनुसार बेस क्याम्प स्थापना र सडक निर्माण स्थलमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने काम भइसकेको छ।
तर, डिपिआरविना नै सेनाले काम गरिरहेको छ । परामर्शदाता नियुक्त गरेर सेनाले तयार गरेको डिपिआर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छैन । यसमा विवाद कायमै छ । आयोजनामा ढिलाइ हुँदा झन्डै ३१ अर्ब लागत बढेको छ ।
लागत अनुमानः १४ अर्ब ३९ करोड
संशोधित सम्पन्न मितिः ०७७–७८
ढिलाइपछिको संशोधित लागतः ३३ अर्ब ३७ करोड
आगामी आवमा विनियोजित बजेटः १२ अर्ब २० करोड
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काठमाडौं र दाङमा कार्यालय राखेर काम गर्दै छ । मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रमा काम गर्न समस्यालगायतका कारणले चुनौती थपिएका छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग, त्रिभुवन विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, तमोर जलाशययुक्त आयोजना लगायतका आयोजनालाई पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत राखेको छ।
तर, कुनै पनि आयोजनाको निर्माण प्रगति सन्तोषजनक छैन।
रुचाललाई सुरुमै न्यायाधीशले साेधे : तपाईंले बसमा वीर्य स्खलन गरेको हो?
उपनिर्वाचन समीक्षा गर्दै देउवाले भने-हामी बलियो बन्दै छौँ
आफैंले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका युवाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हाल्ने मोहम्मद अफ्ताब आलमको आतंक कुन हदसम्म छ? १२ वर्षपछि उनलाई जेल पठाउने न्यायाधीशको मनस्थितिले पनि बयान गर्छ। पुर्पक्षका लागि आलमलाई ...
रौतहट इँटाभट्टा काण्डका मुख्य योजनाकार सांसद मोहम्मद अफताव आलम मात्र होइन, घटनामा संलग्न उनका विश्वासपात्र सखी मोहम्मद पनि पक्राउ परेका छन्। सखी आफैं पनि घाइते भएका थिए। तर तर आलमका विश्वासपात्र भएकाले ...